घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » संस्कृति » Dusseldorf HELAU! जीवन मनाउन सामूहिक रूपमा मूर्खहरू!
संघ समाचार • ब्रेकि European युरोपेली समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • संस्कृति • मनोरञ्जन • जर्मनी ब्रेकिंग न्यूज • सरकारी समाचार • सभाहरूमा • समाचार • मान्छे • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार
रेकर्ड कोरोनाभाइरस संख्याले जर्मनीको ड्युसेलडोर्फमा मानिसहरूलाई जीवन मनाउन रोकेन, आज कार्निवलको सुरुवात मनाउने भनेको के हो।
Hoppeditz Dusseldorf मा ब्यूँझिएको छ, तर कोलोन मा त्यति धेरै छैन!
ड्युसेलोर्फ, राइन नदीमा रहेको जर्मन शहरमा, कार्निवल सत्र २०२१/२०२२ को लागि आज नोभेम्बर ११, २०२१ बिहान ११:११ बजे किक-अफ भयो।
कार्निवल मूर्खहरूको बारेमा हो। र तिनीहरू डुसेलडोर्फ सिटी हलको अगाडि भेला भए
डुसेलडोर्फमा कार्निवल बिनाको समय सकियो।
Hoppeditz ब्यूँझिएको छ। समय अनुसार 11.11 मा। 11.11:XNUMX बजे तिनले आफ्नो तोरीको भाँडोबाट बाहिर निस्के र सहरका अधिकारीहरूलाई मूर्ख लेवीहरू पढे। लर्ड मेयर डा. स्टेफन केलरले बालकनीबाट छोटो भाषणको साथ जवाफ दिए, त्यसपछि उनी बजार स्क्वायरमा हप्पिडिट्ज टम बाउरमा आए।
हालको लागि, धेरै कार्निवल साथीहरूले उत्सुकतापूर्वक प्रतिक्षा गरिएको वार्षिक कार्यक्रमलाई पछ्याउन सक्षम भएनन्, तिनीहरूले गत वर्ष जस्तै, तर फेरि साइटमा व्यक्तिगत रूपमा।
हजारौंले यस अवसरको फाइदा उठाए र सत्रको सुरुवातसँगै एकसाथ उत्सव मनाए।
डुसेलडोर्फमा कार्निवलको नारा छ:
"हामी जीवन मनाउँछौं"।
Hoppeditz भाषण पछि, समिति Düsseldorfer कार्निवल सिटी हल अगाडि खुला-एयर स्टेज मा एक नयाँ कार्निवल हिट प्रस्तुत।
अन्य मध्ये, स्विंगिङ फनफेरेस र केजी रेगेनबोगेन, जसले आदर्श गीत प्रस्तुत गरेका थिए, अल्ट शुस, कोकोलोरेस, डे फेज्टर र अन्य धेरै थिए।
सत्रमा, राज्यको राजधानीका मूर्खहरूको नेतृत्व राजकुमार डर्क द्वितीय (डा. डर्क मेक्लेनब्रक) र भेनेसिया उसा (उसा क्याथरिना माइस) ले गर्नेछन्।
नोभेम्बर 13 मा, सबैभन्दा सानो जेकेनले फेरिस ह्वीलमा रहेको Burgplatz मा बच्चाहरूको मोपेडिट्ज जागरण मनाउँछ। Rheinische Garde Blau-Weiss का दस वर्षीय निक्लास वेस्चेले आफ्नो प्रिमियरलाई बच्चाहरूको मोपेडिट्जको रूपमा मनाउनेछन्।
राजकुमार दम्पतीको छनोट नोभेम्बर १९ मा स्टाडथलमा हुनेछ । 19 फेब्रुअरी 24 मा Rathaussturm सँग Altweiber बाट, सत्र तातो चरणमा प्रवेश गर्नेछ। हाइलाइट 2022 फेब्रुअरी 28 मा गुलाब सोमबार जुलुस हो।
दुर्भाग्यवश नजिकैको कोलोन, शहर जहाँ कार्निवल सबैको जीनमा छ, राजकुमार कोरोना भाइरसबाट बिरामी थिए।